OPPO na-ekwuwapụta A37 lekwasịrị anya na nnukwu foto | Gam akporosis
OPPO na-ekwuwapụta A37, smartphone ntinye na nnukwu foto
OPPO bu ihe ozo n’ime ndi n’emeputa ekwenti anyị na-esokarị maka oke ịdị irè ya n'ịgbalị ịmalite ndị nwere ezigbo ego. Izu ole na ole gara aga, anyị nwere mbipụta pụrụ iche nke FC Barcelona nke R9 na ọnwa ole na ole gara aga ma R9 na R9 Plus, smartphones abụọ ruru nha ihuenyo dị iche iche ruo 6 sentimita asatọ na nnukwu mbipute.
Ugbu a bụ mgbe OPPO kwupụtara ọkwa ntinye ọhụụ na-elekwasị anya nke ọma na foto. Ọ bụ eziokwu na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ na-achọ smartphone na ezigbo mma na foto, na anyị na-ahọrọ njedebe dị elu na foto dị egwu na-eme ka ntinye ntinye, ọ bụrụ na ị maara otu esi ahọrọ ihe ndị mejupụtara nke ọma, nwere ike ịhọrọ ezigbo mma ma e jiri ya tụnyere ihe ọ bụ afọ ole na ole gara aga.
Nwere a ọnụọgụ ego nke $ 199, A37 nwere agba mkpuchi agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba nke anya abụọ lensụ agba abụọ. N'ihu ya na igwefoto 3.0MP nwere OmniBSI na pikselụ 5um nke kwesịrị inye aka na oge ndị ahụ mgbe achọrọ foto maka ọnọdụ ọkụ dị ala. N’akụkụ bụ isi A1.4 nwere igwefoto 37MP nwere otu pikselụ nha ya na 8um yana ike ikpokọta foto ise iji mebe otu 1.4 MP. Otu n'ime nkọwa ọ ga - abụ ga - abụ sọftụwia nke na - ejide aka onye ọrụ ka ọ nwee ike ịmalite ngụda iji weghara ụdị ejiji ndị ahụ.
N'ime nkọwa ndị ọzọ anyị nwere ike ikwu maka a 5 anụ ọhịa ahụ 720p ya na Gorilla Glass 4, 2 GB nke RAM, Snapdragon quad-core chip, batrị 2.630 mAh, 16 GB nke ebe nchekwa dị n’ime ya na kaadi microSD na nkwado SIM abụọ.
Ọnụ akpali mmasị maka ego na maka ụdịdị dị na igwefoto ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OPPO na-ekwuwapụta A37, smartphone ntinye na nnukwu foto
Onye nchoputa Xiaomi na akowa ihe kpatara na Smartphone ya adighi mmiri